China AH Slurry Pump Rubber THROAT BUSH fekitari uye bhizimisi | YAAO
Slurry pombi huro gwenzi ndechimwe chezvinyoro nyowani mune yakatwasuka slurry pombi iyo inotungamira slurries kune impeller, iko kunokwezva parutivi liner iyo yakabatana nekavha ndiro.
Huro gwenzi rakajairika mumapombi akakura, nekuti huro gwenzi uye volute liner zvinowanzo kuve mune chimwe chidimbu chakasimba mumapombi madiki. Iyo dhizaini yeslurry pombi huro gwenzi inoenderana nemutengo unoshanda mukugadzira uye kushanda.
Vazhinji vashandisi uye vatengesi vanoshandisa izwi rekuti 'throatbush' zvakasiyana pamwe ne'huro gwenzi ', yakajairika uye inogamuchirwa inoteedzerana chiperengo.
Slurry pombi pahuro mabhushi anowanzo gadzirwa mune yakakwira chrome alloy kana yakasikwa rabha, zvakakosha zvinhu zvinowanikwawo.
AH PUMP THROAT BUSH KODHI
* Nekuti isu tiri chaicho chigadziri, isu tine akawanda eparutivi zvikamu zve stock ye slurry pombi yehuro gwenzi
* Slurry pombi mamiriro
* YAAO® chiratidzo chakanyoreswa uye hachimiriri kana kuti hachina kubatana neWarman® yeWeir Minerals Group. Mazita ese, nhamba, zviratidzo uye tsananguro zvinoshandiswa pakuitira chinangwa chete uye hazvireve kuti chero pombi kana zvikamu zvakanyorwa chigadzirwa cheWarman Pumps.
* YAAO® pombi yehuro gwenzi inongochinjika neWarman® pombi yehuro gwenzi.
* Gwaro iri chivakwa cheYAAO® Pump uye harigone kuburitswa kana kuziviswa kune wechitatu bato pasina mvumo yakanyorwa.
Pashure: Makore masere Anoburitsa Slurry Pump Spare Zvikamu Zvivhara Plate - L-Type Slurry Pump impeller - YAAO
Zvadaro: Slurry pombi yerabha liner